U.K. iyo Jarmalka oo ku booriyay Itoobiya in ay ixtiraamaan q... | Universal Somali TV
U.K. iyo Jarmalka oo ku booriyay Itoobiya in ay ixtiraamaan qorshaha dib-u-habeeynta siyaasadeed, iyo xasiloonida dalka.
Boqortooyada Ingiriiska iyo Jarmalka oo ka hadleen siyaasadda cusub ee Itoobiya, ayaa ugu baaqay xukuumadda in ay raacdo ballan-qaadkooda ku saabsan dib-u-habaynta siyaasadeed iyo in ay balaariyaan dimuqraadiyada.
Baaqa wadamadan ayaa yimid kadib markii la sii daayay in ka badan 500 oo maxaabiis siyaasiyiin ah sida ay xukuumadda ballanqaaday horaantii bishan oo uu ka mid ahaa Merera Gudina, hogaamiyaha mucaaradka ugu weyn Itoobiya.
Safaaradaha wadamadan ayaa sidoo kale carabka ku adkeeyay baahida loo qabo siyaasada furan oo dadka loo oggolaada in ay ka qayb qaataan hannaanka maamulka.
Isbahaysiga talada haya ee Itoobiya, EPRDF, ayaa cadaadis lagu saaray in ay ixtiraamaan xuquuqda siyaasadeed ee mucaaradka , saxafiyiinta ka hadla xukuumadda iyo dhaqdhaqaaqayaasha xuquuqda.
Safaarada Jarmalka ee Addis Ababa ayaa soo dhaweysay sii deynta maxaabiista uu ka mid ahaa Dr. Merera Gudina, waxaana ay u hambalyeyeen xukuumadda Itobiya oo qaaday tallaabo muhiim ah, taas oo gacan ka gaysanaysa balaarinta siyaasadda Itoobiya.
Safaarada ayaa ku boorisay xukuumada tallaabooyin dheeraad ah oo loo qaado, si loo siiyo codkooda dhammaan kooxaha siyaasadeed ee Ethiopia iyo in la helo xal waara ee xasiloonida dalka.
Safaaradda Ingiriiska ee Addis Ababa ayaa dhankooda aad u soo dhaweyay sii deynta wareegga koowaad ee maxaabiista ay bilaabeen dawlada oo ay ku jiraan dhawr siyaasiyiin muhiim ah.
Tani waxay calaamad u direysaa dadka Itoobiyaanka ah iyo beesha caalamka ayay raaciyeen
Kan-xigaQaramada Midoobay oo codsaday 1.6 bil...
Kan-horeDegayaasha iyo xagjiriinta Israel, oo...
41,765,872 unique visits